IINDLELA EZINGABIZI KAKHULU ZOKUHOMBISA IGUMBI LOKULALA LAMANTOMBAZANA AFIKISAYO - UYILO LWEGUMBI LOKULALA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokulala Iindlela ezingabizi kakhulu zokuhombisa igumbi lokulala lamantombazana afikisayo
Iindlela ezingabizi kakhulu zokuhombisa igumbi lokulala lamantombazana afikisayo
Wamkelekile kwiphepha lethu leengcebiso ngeendlela ezingabizi kakhulu zokuhombisa igumbi lokulala lamantombazana akwishumi elivisayo.
Kwilizwe lobukhazikhazi le-Instagram, amagumbi amantombazana akwishumi elivisayo abonisa iimpahla zexabiso eziphezulu ezinomhlobiso obizayo. Kwaye, yeyiphi intombazana ekwishumi elivisayo ebingayi kufuna ukuba igumbi layo libe yi-Insta-fab, okanye idume nge-Insta? Izinto zokuqala kuqala, yenza umntwana wakho akwishumi elivisayo enze ibhodi yeemood okanye akunike imifanekiso yokuphefumlelwa. Oku kuyabanceda ukuba babone isimbo sabo. Nokuba igcwele kwi-glam, surfer chic, okanye nge-rustic, uya kuba nakho ukwenza indawo eyilwe kakuhle ngaphakathi kuhlahlo-lwabiwo mali.
Khetha izixhobo ezingathath'icala
Imithombo yeendaba kwezentlalo nguzwilakhe omkhulu weendlela kunye nolutsha lwanamhlanje lokuthanda izinto lutshintsha ngokukhawuleza okukhulu kunokwakho njengomntu ofikisayo. Gcina loo nto engqondweni njengoko ukhetha ukubonelela, gcina iziqwenga zakho ezinkulu zingathathi hlangothi kangangoko ukuze zikwazi ukuhamba ngokulula ukusuka kwelinye ukuya kolandelayo. Impahla yeenkuni ezimhlophe engenawo umhombiso omninzi kulula ukudityaniswa kuyo nayiphi na indlela. (Ndwendwela iphepha lethu malunga izimvo zokulala zolutsha yoyilo nangakumbi)
Ipeyinti Ifenitshala ekhoyo
Ukuba sele unayo ifanitshala enkulu enje ngebhedi, isinxibo, idesika, kunye nethala leencwadi, ucinga ukubanika uhlaziyo ngengubo entsha yepeyinti emhlophe. Ukuba usemarikeni kwimpahla entsha, jonga kwiivenkile ezinje nge-Ikea, apho ufumana i-bang eninzi yebhanti yakho kwaye i-intanethi izele ziiwebhusayithi ezibonisa ii-Ikea hacks ezipholileyo ukwenza ngokwezifiso ukuthenga kwakho.
Thabatha iiBargains kwiiVenkile zoThengiso nakwiNtengiso yeGaraji
Musa ukoyika iivenkile ezithengisayo kunye nentengiso yegaraji, ngekhe wazi ukuba yeyiphi na into epholileyo onokuyifumana, enkulu okanye encinci. Zijonge ngeliso lomyili, yintoni onokuyitshintsha ukuze ihambelane noyilo lwakho?
Fumana ukukhanya okukhulu
Lonke uyilo olukhulu lubandakanya ukukhanya okukhulu. Ukukhanya ngokubanzi, ukukhanyiswa kwemisebenzi, kunye nezibane ezihombisayo azisebenzeli kuphela ukwenza igumbi libukeke lilungile, kodwa ukuze lisebenze. Izibane zokuhombisa zinokuba zizibane zentsomi phakathi kweengqimba ze-tulle zekhephu ngaphezulu kwebhedi yasemini, phakathi kweengqimba zesiketi sasebhedini, okanye iityhubhu ezimbalwa ezikhanyisiweyo ezikhanyisiweyo eziphoswe phantsi emgangathweni kufutshane neetafile zomgangatho. Izibane ezixhonyiweyo zinokubanjwa ngeendlela ezahlukeneyo zokunyusa imeko yegumbi kwaye zivumele intombazana ukuba ibonakalise eyayo isitayile.
Ukukhanya kwemisebenzi kuyadingeka kwidesika apho kwenziwa umsebenzi wasekhaya kunye nokuzoba, kwisipili sokwenza, kwaye ecaleni kwebhedi yokufunda ebusuku. Xa ukukhanya kwemisebenzi ethile, iteleskopu kunye neengalo ezinokuhlengahlengiswa zifunwa kakhulu, kwaye xa isibane somsebenzi sisetyenziselwa ukwenza, yiya kwibhalbhu epheleleyo yokulinganisa ukukhanya kwemini. Izibane ngokubanzi zizibane eziphezulu kunye nezibane zomgangatho okanye zetafile kwaye zinokusebenza zombini kunye nokusebenza. Faka isiciko sokukhanya esine-frumpy ekhanyayo kunye ne-chandelier encinci okanye umthunzi we-drum ojonge ezantsi, zombini kulula ukuzifumana kwiivenkile ezinkulu zebhokisi kwaye azibizi kwaye kulula ukuzifaka.
Yongeza ezininzi iipilo
Amantombazana akwishumi elivisayo anemibala asetiweyo
Iipillow zizandi ezinkulu malunga nalo naliphi na igumbi, kwaye oku kuyinyani ngakumbi kumagumbi olutsha. I-Sleepovers, amaqela okufunda, okanye isonka nje esijikeleze ukutya kufuna ukusetyenziswa kwemiqamelo emininzi kuzo zonke iimilo kunye nobukhulu. Ungasebenzisa iifom zomqamelo okanye iipilo ezindala zokuphosa ezinokusebenzisa uhlaziyo oluncinci. Nokuba uyathunga okanye awuthungi, kukho iindlela ezikhawulezayo nezilula zokugubungela iipilo zakho ezindala.
Fumana uMthuthuzeli omtsha
Umthuthuzeli weentyatyambo oguqulwayo
Ukutshintsha iilinen zebhedi, i-quilt okanye i-comforter yindlela ekhawulezayo yokuzisa utshintsho kumxholo kwigumbi lokulala lentombazana ekwishumi elivisayo. Olunye ukhetho oluthandwayo lokuprintwa kwamantombazana kubandakanya, iti, iintyatyambo, i-watercolor, i-unicorn, iingoma zengoma, i-mermaid, ipateni epinki, ipateni ye-chevron kunye neempawu ezidumileyo zesixeko ezinje ngeParis okanye eNew York.
Sebenzisa amalaphu e-DIY
(Umnxeba womfanekiso IFlickr )
Cinga ngaphaya kokuthenga izembozo zomqamelo okanye ilaphu, kutheni ungasebenzisi ihempe endala okanye ihempe enamaqhosha? Yonke into oyifunayo zizikwere ezibini (okanye iingxande, kuxhomekeke kubume bomqamelo wakho) malunga nobungakanani obufanayo nomqamelelo wakho, iglu okanye ukuthunga imiphetho emithathu ngokudibeneyo, amacala angasekunene ajongane, emva koko ungene ngaphakathi uphume, ufake umqamelo wakho, kwaye thunga okanye uncamathele kumda oshiyekileyo. Kukho izifundo ezininzi ezikwi-Intanethi ezibonisa indlela yokwenza oku.
Kwimithwalo emikhulu yomgangatho, unokude uthabathe amanye amaphepha amnandi kwisikhuselo kwaye wenze isigqubuthelo somqamelo kuwo. Yongeza iirebhoni okanye unciphise njengoko unqwenela, kuxhomekeke kukuthanda kwakho. Splurge kwiipilili ezincinci zokuhombisa ezinee-sequins okanye ezimilo okhethekileyo, zibeke kunye neepilo zakho ezenziwe ekhaya, kwaye ujongeke kamnandi ngokusebenza okuninzi.
Yenza eyakho indawo yokugcina
Ukwenza iibhokisi zokugcina ezokuhombisa usebenzisa ipeyinti yokutshiza, amaphepha anemibala, kunye neengxowa ezivela kwivenkile oyithandayo kulutsha zilungele ukwenza uhlahlo-lwabiwo mali. Thatha iibhokisi zekhadibhodi ezingabizi kakhulu kwivenkile yobugcisa bakho (okanye sebenzisa ukugcinwa kwezihlangu iibhokisi okanye iibhokisi zesiriyeli) kwaye uzitshize ngepeyinti yegolide okanye omnye umbala osebenza kunye noyilo lwakho kwaye uzisebenzise ukugcina zonke ezo zinto zincinci zingenayo indlela yazo ebomini bakho bolutsha. Ezi bhokisi ziza phantse ngazo zonke ubukhulu kunye nemilo, ezinye zibonakala ngathi ziincwadi okanye iibhegi.
Vala ngeplastikhi encinci eyenziwe ngeplastikhi ephethe ibhegi ngebhegi evela kulutsha oluthandayo kwiivenkile zokuzenzela. Unokuzicwangcisa kwakhona iibhegi kwizakhelo ezingabizi kakhulu ukuba unolutsha oluthandayo ukwenza kunye nefashoni. Uninzi lweengxowa ezivela kwiivenkile ezidumileyo ziza ngemibala emihle enokukunceda usete ithoni kuyo yonke uyilo lwakho.
Yakha ibhodi yentloko yeplanga
Ibhodi yebhodi yebhodi yokhuni ingaba yinto elula yokwenza iprojekthi ye-DIY enokuzisa ubuninzi beempawu kwigumbi lokulala. I-headboard enje enokwenziwa ukuba ijongeke njengowasetyhini ngakumbi ngokupenda umbala omhlophe okanye umbala we-pastel kwiziphumo ezilungileyo.
Igumbi lakho lokulala elinegama lodonga
Amagama enu aseludongeni
Indlela emnandi yokwenza igumbi lokulala ngokongeza igama lodonga. Ungasebenzisa istensile esinexabiso eliphantsi ukuyenza ngokwakho okanye uthenge uphawu lokudala olwenziwe ngokwesiko onokuthi ubambelele eludongeni olungaphezulu kwebhedi.
Yenza udonga lweAccent Wallpaper
Ukongeza udonga lwegama lodonga kwigumbi yindlela elungileyo yokwenza ingxelo. Unokukhetha imibala oyithandayo okanye uyilo ukuze ufumane isitayile osifunayo. Ukuxhoma iphepha lodonga kudonga olunye kuphela kunene kulula kunokwenza zonke kwaye kunokugqitywa ngeeyure ezimbalwa.
Guqula umbala wePeyinti yokulala
Olona lwabiwo mali lunobuhlobo kubo bonke, yipeyinti. Ipeyinti yodonga inokutshintsha imo kunye nokujonga kwegumbi. Udonga lwe-ombré olwenziwe ngeethoni ezimfusa libukeka limangalisa emva kwebhedi. Imigca ethe tyaba ngombala omnyama nomhlophe yenza ingxelo ebhaliweyo.
I-grey ethambileyo inikezela ngokungathathi hlangothi okudibanisa ngasemva kwaye ivumela izixhobo kunye nomsebenzi wobugcisa ukuba ukhanye. Umpopu obomvu oqaqambileyo kudonga lwangasemva kwishelufa yeencwadi emhlophe unika ukukhanya okukhanyayo ngaphandle kokugcwala isithuba. Kumntwana wobugcisa, ungqameko lwepeyinti enemagneti efakwe ipeyinti ebhodini inika iphalethi enobungakanani begumbi lokuhombisa ngomsebenzi wabo wobugcisa. Ungesabi ukuhamba ngesibindi okanye ukukhanya, okanye nokuba mnyama kunye ne-moody, kulula ukupeyinta xa kuvela imbonakalo entsha.
Ukuhombisa amantombazana akwishumi elivisayo akufuneki kubize. Vumela ukuba bafune into ebakhuthazayo kwaye bajonge kumxube we-DIY, izinto ezingabizi kakhulu, iivenkile ezithengisa izinto kunye nepeyinti yokwenza amaphupha abo abe yinyani.
ngowuphi umnwe ofaka iringi yokusulungeka
Imibala ecacileyo yeCaydo 50 Sheets 200 Origami P… $ 10.99$ 18.00 umthengisi ogqibelele (582) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IRIS USA TB Coca iPlastiki yoGcino ... $ 34.99 umthengisi ogqibelele (20624) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ipeyinti yebhodi ebhodini ye-DIY ngu-American C… $ 12.38 umthengisi ogqibelele (2608) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umququzeleli wePuTwo Vintage M… $ 26.98 ngexabiso umthengisi ogqibelele (1628) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Krati ithumela ngaphandle i-Indian Floor Pillow Cushion Cove… Iidola ezingama-29.90 umthengisi ogqibelele (114) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Isakhelo sefomathi ye-MCS, 8.5 x 11 in, Mnyama, Bala ama-12 $ 39.99 umthengisi ogqibelele (1526) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
IGiftgarden 8.5x11 Iifreyimu Zomfanekiso Isakhelo Esimnyama S… $ 34.49 umthengisi ogqibelele (853) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ixabiso eliphakathi lomtshato
Greenland Ekhaya Cotton Voile Uthuli Ruffle, 1… $ 46.27 umthengisi ogqibelele (Ngo-1898) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
Ungalitshintsha njani igama lakho kwi-Connecticut
ucingo lwangasese oluyimfihlo
bopha amaqhina ezimemo zomtshato
yeyiphi na iringi yothethathethwano eqhubekayo